Maxkammadaha socdaalka Iswiidhan oo macluumaad is weeydaarsanaya | Somaliska
Maxkammadaha socdaalka Iswiidhan oo macluumaad is weeydaarsanaya
Dalkaan Iswiidhan ayaa maxkammadahiisa laanta socdaalka, waxaa la filayaa ineey bilaabaan isweyddaarsiga macluumaadka kiisaska ay hayaan. Tallaabadan macluumaad isweeydaarsiga ayaa bilaabaneeysa bishan eynu ku jirno ee oktoobar.
Idaacada raadiyo Iswiidhan p4 ee deeganadda Norrbotten, ay sheegtay in maxkamdda socdaalka ee magaaladda Luleå ee waqoyiga Iswiidhan ay kiisas gaaraya afar boqol kala soo wareegeeysa maxkamada socdaalka ee ku taala dhanka koofureed ee magaaladda Malmö.
Haweeneyda lugu magacaabo Anna Sivlér oo ah madaxa garsoore ka tirsan laanta socdaalka e magaaladda Luleå ayaa sheegtay in arrimahani yihiin kuwo la xirriira arrimo badan oo isku dhex jira ama kala duwan. Waxaa kale oo ay sheegtay in salka ay ku heeso kiisas badan horey aannu soo gaarin maxkamadda tan iyo markii ay dalka soo galeen qaxooti farro badan.
Ugu dambeyntiina maxkamadda Luleå ayaa gacanta ku soo dhigeeysa dhawaan kiisaska quseeya dadyowga doonaya in ay eheladooda la midoobaan kuwaas oo haatan jooga dalka dibadiisa. Waana markii ugu horeeysay oo maxkamadaha socdaalka ee ku kala yaala cirifyadda waqooyi iyo koonfur ee ay is weydaarsan doonaan warbixin noocan ah.
Safaarada Sweden ee Nairobi oo shaqadii bilowday
Iswiidhan oo aan wax ka badaleeynin go’aankeedii dib u celinta Afgaaniyiinta